एनआरएन दोस्रो विज्ञ सम्मेलन धुलिखेलमा
प्रकाशित २०७६ माघ ८ बुधबार
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा हुने दोश्रो एनआरएन विज्ञ सम्मेलन आगामी अक्टोवरमा हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माका अनुसार सो सम्मेलन काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलमा हुने भएको हो ।
पहिलो सम्मेलन सोल्टी होटलमा आयोजना हुदाँ महङ्गो दर्ता शुल्क भएको आलोचना भए पछि संघले दोस्रो सम्मेलन काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गर्न लागेको हो । काठमाण्डौं विश्वविद्यालयमा सम्मेलनको आयोजना गर्दा सहभागीहरुको संख्या बढ्ने विश्वास डा. शर्माको छ ।
यसै बीच संघको एक टोलीले बुधवार काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपती, डिनहरु, विभागीय प्रमुखहरु लगायत उच्चपदाधिकारीसंग छलफल गरेको छ । संघका पदाधिकारी सहित काठमाण्डौं विश्वविद्यालय पुगेको टोलीले सम्मेलनलाई उपलब्धीमुलक बनाउन घनिभुत छलफल भएको महासचिव डा. शर्माले जनाए । संघको टोलीमा उपाध्यक्षहरु सोनाम लामा, मन केसी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती थियो ।
यसअघि संघले एनआरएन विज्ञ सम्मेलन वारे परराष्ट्रमन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारका उच्चअधिकारीसंग छलफल गरेका थियो ।